Friedrich Hölderlin. Chirangaridzo cherufu rwake. Mitsara uye nhetembo | Zvazvino Zvinyorwa
A Friedrich Holderlin, Munyori weGerman, achipfuura mazana emakore XVIII uye XIX, inoonekwa se nyanduri mukurusa wechiGerman Chidimbu. Aive zvakare munyori wenhau uye mutambi wemitambo, zvakare ano yemazita akakurumbira se Hegel kana Schiller, pamwe inonyanya kuzivikanwa nguva iyoyo. Hölderlin akafa zuva rakafanana nhasi de 1843 mushure memakore mazhinji achigara muchivande, akabatwa ne schizophrenia Izvo hazvina kumutadzisa kunyora nekugadzira. Kuti ndizvirangarire kana kuzviwana, ini ndinosarudza akateedzana e mitsara uye nhetembo yebasa rake netsamba dzake.
Ini ndanga ndichienda kuhupirisita, kutaura chokwadi, kupera Dzidziso, asi haina kumbobvira yadzidzira uye mukati 1793 yakaburitsa yake nhetembo dzekutanga ndinotenda Friedrich Schiller, chii chako shamwari nevatengi. Yake kufarira kuburikidza nenyika yekare ye Greece uye Roma yakariisa pabasa rake. Zvaive chaizvo kubereka, kunyangwe achitambura a schizophrenia iyo yakaonekwa kwaari pakutanga kwezana ramakore rechiXNUMX uye iyo kuchengetedzwa kusvikira afa.
Su basa rinozivikanwa ingano, Hyperion, asi akarima mutambo uyu mu Kufa kwaEmpedocles, uye kunyanya nhetembo dzine nziyo dzakasiyana siyana, odes uye elegies: Nhetembo kuna Diotima (akafuridzirwa nemudiwa wake Susette Gontard) kana iko kuunganidzwa kwenhetembo Tariro. Yaro zvakare yakachengetedzwa tsamba.
Kuzara kwehupenyu husingagumi hwenyika kunopa uye kunogutsa munhu wangu anoshaya ave nekudhakwa.
Mumwe nemumwe ngaave sezvaari chaizvo. Usarega chero munhu achitaura kana kuita zvinopesana nemafungiro ako uye nemanzwiro anoita moyo wako.
Yeuka maawa edu asina kunetsekana apo isu tanga tiri padhuze peumwe? Uku kwaive kukunda! Zvese zviri zviviri zvakasununguka uye zvinodadisa uye zvinopenya mumweya, moyo, maziso uye kumeso, uye zvese murunyararo rwedenga, pamwe chete!
Munhu anofanira kuzviratidza, aite chinhu chakanaka kuti akodzere, aite zviito zvakanaka, asi munhu haafanire kungoita pachokwadi, asiwo mumweya ”.
Ari padyo sei murume muhudiki hwake anofunga icho chinangwa Ichi ndicho chakanakisa pane zvese zvisipo izvo zvisikwa zvinobatsira kushaya simba kwehupenyu hwedu.
Iko kune kukanganwa kwehupenyu hwese, kunyarara kwehunhu hwedu, zvinoita sekunge tawana zvese.
Hupenyu hwaizovei pasina tariro? Hana inokwakuka kubva mumarasha ndokudzimwa, kana senge apo mhepo inonzwika muchiteshi chisingafadzi icho chinoridza mhere kwekanguva chobva chadzikama, angave isu here?
Rwiyo rweHyperion rweRufu
pane yakapfava ivhu, vanofara geniuses!
Mhepo dzaMwari, dzinopenya,
Pasina ramangwana, sevacheche
avo vanorara, vanofema vamwari;
mune yakachena cocoon inochengetwa
Uye mumaziso ake akakomborerwa
Asi hatina kupihwa isu
mira kumwe kunhu.
nguva mune imwe,
nekusingaperi, kune vasina chokwadi.
Haiwa, maguta eYufuratesi!
Oo, migwagwa yePalmyra!
Oo, masango emakoramu mugwenga rinochema!
uye wakabvisirwa moto wacho;
asi kugara zvino pasi pemakore (ese
inozorora murunyararo rwayo)
pasi pemiti mikuru, mu
iyo mumvuri panodyiwa mhara,
Zvakakoshera munhu kukosha uye kwakanyanya kunaka kwehupenyu,
Varume vanowanzo kuve masters ezvisikwa,
Kwavari nyika yakanaka haina kuvanzwa,
Asi nekutapira anokurura mangwanani nemanheru.
Minda yakavhurika yakafanana nemazuva ekukohwa,
Pakatenderedza iyo yekare Legend inopararira pamweya,
Hupenyu hutsva hunogara hudzokera kuhunhu hwedu,
Uye gore rinokotama richiri kamwe chete chinyararire.
Zvinyorwa: Blog Kubhururuka kwezizi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Friedrich Hölderlin. Chirangaridzo cherufu rwake. Mitsara uye nhetembo